Bonke abazali, ngokushesha noma kamuva, babhekene nenkinga yokukhwehlela nezingane zabo. I-Cough iyindlela yokuzivikela yokuzivikela yomzimba ekucasulweni okuwa phezu kwekhanda elimangalisa. Luphawu lwezifo ezihlukahlukene zendlela yokuphefumula: isifo esithathelwanayo, esibandayo, esiyingozi. Isifo ngasinye sinalo uhlobo lwaso lokukhwehlela - olomile, ngokuyisisekelo, nge-phlegm, ukugwinya, i-paroxysmal.
Ukwelashwa okuphumelelayo kokukhwehlela ezinganeni kuqala kuhilela ukucacisa izimbangela zokubonakala kwazo. Ngokuvamile ukukhwehlela kubonisa njengesifo sokutheleleka okubangelwa ukuphefumula kwesifo sofuba (ARVI). Ukutheleleka okunjalo kungathinta kokubili ukuphefumula okuphezulu (i-nose, nasopharynx, i-oropharynx), namaphansi (amaphaphu, i-bronchi, i-trachea, i-larynx). Futhi bangela ukukhwehlela kungaba ukuvuvukala kwezitho ze-ENT, njengezkhala, ama-pharynx, ama-sinus paranasal, noma ukwanda kwama-pharyngeal tonsils (adenoids).
Isikhumba sibonakaliso esibaluleke kakhulu esibhedlela sokuphefumula kwesifo sofuba, lapho ukukhwehlela kungenza khona okulingana nokuhlaselwa kwesifo sokuhlushwa. Ukuhlaselwa okungazelelwe kokukhwehlela kungasebenza njengesiginali sokuba ingane ivule umzimba wangaphandle emgqeni we-trachea ne-bronchi, engaba yingozi empilweni yakhe. Kulesi simo, kufanele ufune ngokushesha usizo lwezokwelapha.
Izifo zokuphefumula azikwazi ukudala ukukhwehlela njalo. Isibonelo, kungabonwa ezinganeni ezine-pathology yezinambuzane zamathumbu noma izinkinga zenhliziyo. Futhi, ukukhwehlela kungabangelwa izinto ezilimazayo, ezimweni ezithile zingatholakala emoyeni ngobuningi (ugwayi ugwayi, ukungcoliswa kwegesi), noma umoya oshisayo kakhulu futhi omile ekamelweni.
Ngaphansi kancane, ukukhwehlela kungaba yinkimbinkimbi noma yengqondo, okungukuthi, kungenzeka ngokuvuvukala kwezindlebe eziphakathi noma ukwakheka kwamapulaki esibabule emgodini wangaphandle wokuhlola.
Ukukhethwa kokwelapha kufanele kunqunywe uhlobo lokukhwehlela nesithombe somtholampilo jikelele. Ama-Antitussives kufanele anqunywe udokotela wezingane. Kusukela ngesikhathi sokukhwehlela umzimba uzama ukususa imimoya, ukulwa nalesi sifo kungaholela ekutheleleni okunamandla emzimbeni, okungaholela ekucindezeni. Ukuphumelela kokwelashwa ukusiza umzimba womntwana ukusula nokukhulula ukucindezeleka okubhekene nakho.
Izidakamizwa ze-Antitussive zihlukaniswe ngezigaba ezintathu: i-mucolytic (ikwazi ukuhlanza i-sputum), i-expectorant (ukwandisa ukukhwehlela) kanye nezintuthwane (ukukhulula ukukhwehlela, okuphazamisa isikhungo sokukhwehlela ohlelweni lwezinzwa).
Ukwelashwa kwengane ekukhwehleleni kufanele kwenzeke ezimweni ezikhululekile kuye. Ungakhetha noma iyiphi indlela yokwelapha: ngosizo lwezidakamizwa zemithi, amakhambi, amakhambi abantu, noma i-aromatherapy. Kule nkinga, ukwelashwa kungenziwa ukwesekwa ngezinqubo ezinjalo zokuxhumana njenge-inhalation, massage esifubeni, isinaphi, amathini.
Izidakamizwa zemithi zisetshenziselwa ukwelapha izifo ezilandelayo ezinganeni:
- izidakamizwa ze-mucolytic (Ambroxol, ATSTS, Bromheksin, Karbotsistein, Mesna) - i-bronchitis ne-pneumonia;
- izidakamizwa ezisetshenziswayo (izimpande ze-licorice, izimpande ze-althaea, i-Mukaltin, amaqabunga e-coltsfoot, i-iodide ye-potassium, i-broncholitin, i-bicarbonate ye-sodium, amaqabunga e-plantain, i-Pertussin, i-Solutan, i-Chabrets, i-Tussin) - i-bronchitis nemikhuhlane;
- Amalungiselelo ahlanganisiwe (Udokotela MOM, Kodelak fito) - ARVI, ARI, amakhaza.
Uma ukukhwehlela kunciphisa futhi kubuhlungu, futhi izidakamizwa ezingenhla zingenamandla, izidakamizwa ezihlukumezayo ziyasetshenziswa: i-Ethylmorphine, i-Codeine, i-Glaucin, i-Dimemorfan (izidakamizwa zezidakamizwa), i-Butamirate (izidakamizwa ezingekho izidakamizwa), i-Prenoxindiazine, i-Oxeladin.
KUBALULEKILE: kunqatshelwe ukwelashwa ngezidakamizwa eziphikisana nezidakamizwa ngesikhathi esifanayo, lokhu kungabangela ukugcwaliswa kwe-bronchi nge-sputum.
Ukukhanda ikhanda ezinganeni ezincane
Education Physical and Sports for Children
Izingane zakho zisengozini
Ukulungiswa kwesimo esiyinkimbinkimbi kwengane
Ukubuthwa kwendawo yezinsika zezintambo ezinganeni, ukuqeqeshwa kwezingane kanye nevidiyo
Indlela yokusiza ingane ukuba ithole izinyo ezisheshayo
Indlela yokukhipha inyama
Ukuzilungiselela kanjani loNyaka Omusha
Ungasusa kanjani amazinyo ekhaya?
Ukuvuselelwa kothando phakathi kwabantu ababili
I-horoscope yomshado ngezibonakaliso ze-Zodiac: Ngaphansi kwaziphi izinkanyezi umshado wakho owawubanjwe
Indlela yokuletha umuntu ngokuhle ngaphambi kokunqoba
Isitayela sesitayela sezinwele
Ushadile nganoma yisiphi isikhathi
Ukudla okunempilo kwabesifazane abavuthiwe
Ikhekhe nge-apricots omisiwe